Glookast - ချည်နှောင်သောကော်! သူတို့ကို 2015 NAB Show မှာကြည့်ပါ NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » အကြောင်းအရာ Delivery » Glookast - အကော်စေသည်ခညျြနှောငျ! 2015 NAB Show မှာသူတို့ကိုကြည့်ရှုပါ
ပြည်သူ့မကြာခဏသူတို့စောင့်ရှောက်ကုမ္ပဏီအားဖြင့်တရားစီရင်ခြင်းကိုခံရကြ၏ တူညီမူအရကုမ္ပဏီများမှမှလျှောက်ထားနိုင်ပါသည် - GLOOKAST အပါအဝင်, နည်းပညာမိတ်ဖက်များအတွက်အချို့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည့်ကုမ္ပဏီများစောင့်ရှောက်: Object ကို Matrix, Nearline သိုလှောင် Workflows, ဆက်စပ်မှုတွေဝက်ဘ်ဆိုက်များန်ဆောင်မှုများ API ကို, (အဘို့အခွင့်အာဏာဆော့ဖ်ဝဲရေးသူ) လွန်စွာလိုလားသော, XAVC, HDCAM SR (SStP) နှင့် Sony က။ Glookast လည်းအများအပြားပြန်လည်ရောင်းချခြင်းမိတ်ဖက်ရှိပါတယ် - ကြောင်းစာရင်းလတ်တလောထို့အပြင် Tyrell, ဗြိတိန်နှင့်အိုင်ယာလန်မီဒီယာနည်းပညာဖြေရှင်းချက်ထဲမှာခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။
Glookast အားလုံးမီဒီယာဖောက်သည်ကျယ်ပြန့်စစ်ခင်းကျင်းအကောင်းဆုံးလုပ်ငန်းအသွားအလာထုတ်လုပ်အကြောင်းပါ။ ၎င်း၏ထုတ်ကုန်လိုင်းများကြောင့်ရည်မှန်းချက်ကိုထင်ဟပ်။ multiplatform, Multi-resolution နဲ့ Multi-format ကိုဖြစ်ကြောင်းကို modular ကိရိယာများနှင့် Workflows ။ compatibility နှင့်စပ်ရာမရှိသောပေါင်းစည်းမှုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်၏ penultimate အန္တရာယ်ရှိနေပါတယ်။ ဒီတော့အတူတူသင့်ရဲ့လန်းလာသောလုပ်ငန်းအသွားအလာကျင်းပရန်ရှိ gloo ဘယ်လိုဖြစ်သနည်း ကောင်းပြီ ... ငါသည်သင်တို့မေးလျှင်, ဝမ်းသာတယ်! ရဲ့ကုလားကာနောက်ကွယ်တစ် peek ယူကြပါစို့။
Gloobox capture နှစ်ဦး Channel ကို SDI နဲ့ baseband ဖမ်းယူဖြေရှင်းချက်သို့မဟုတ် HD-SDI Capture, Capture HR များအတွက်တစ်ခုမှာ Channel ကို 2K / 4K နှင့်မျိုချမိပါရုပ်သံလိုင်းနှုန်းကို formats သို့မဟုတ်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေအဖြစ်အများအပြား။ ထိုသို့လည်း proxy ကိုဖန်ဆင်းခြင်းရှိပါတယ်။ ဤသည် Gloobox မျိုးစုံကို formats ချစ်သောသူနှင့် IMX, XDCAM ကိုင်တွယ်ထိန်းသိမ်းနိုင် HD 18, 25, 35, 50, XDCAM EX, DV-25, DVCPRO HD 100, AVC-ငါ Capture HR များအတွက် DNx220, DPX, compressed လုပ်မထားတဲ့, DNx220X နှင့်အနာဂတ် HR ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမှ DNxHD တက်။ ဒါဟာ 16 ဖို့ကဲ့သို့အများအပြားအသုံးချနိုင်ပါတယ် HDinput ကိုတစ်ဦးလျှင် -SDI မြှုပ်ထားသောအသံလိုင်းများ။ Capture အကလစ်ပြန်လည်သုံးသပ်နှင့်မျိုချမိပါ chip ကိုကြည့်ရှုခြင်းခွင့်ပြုခြင်းဖြင့်တည်းဖြတ်ကူညီပေးသည်။ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ပုံစံလုပ်ရန်အားဖြင့်ရာထူးတိုးဖြစ်ပါတယ် တင်းပလိတ်များနှင့်တဒါဇင်နဲ့အခြား features တွေ။
Gloobox စားသုံးမိပါ (IMX မှလွဲ. ) ကို Gloobox Capture ကဲ့သို့တူညီသောလမ်းကြောင်းများကိုအထောက်အပံ့ကြောင့် LTC, VITC, ATC, & Tod ဘို့အချိန်ပြည့်ကုဒ်ထောက်ခံမှုရှိပါတယ်။ က ingests နေချိန်မှာသင်တည်းဖြတ်နိုင်ပါတယ်ချွေတာနေတဲ့အချိန်အဖြစ်! ကားစားသုံးမိပါပါဝင်သည်မျိုးစုံ destination သည်မသာ, Nan, ဒါမှမဟုတ် SAN သို့မဟုတ်သင်တို့သည်ရှေးယေဘုယျသိုလှောင်မှုကိုသွားပါ။ Glookast တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာစဉ်းစား လွန်စွာလိုလားသော ဆော့ဖ်ဝဲရေးသူက metadata ကို check-in သို့ကြောင့်လည်းအံ့အားသင့်စရာမဖြစ်သင့် လွန်စွာလိုလားသော ISIS အဖွဲ့ / ဆက်စပ်မှုတွေ (တိုက်ရိုက်စားသုံးမိနှင့်အတူ) ကိုလည်းပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ပါတယ်။ စားသုံးမိပါနှင့် metadata ၏စကားပြောသော; automated စားသုံးမိပါနှင့် metadata တည်းဖြတ်ရေးကိုလည်းထည့်သွင်းထားပါသည်။ (မျိုးစုံကိုရင်းမြစ်များမှအလားအလာ) စားသုံးမိမောင်းထုတ်ရန်ရရှိနိုင်ပါသည်ဖြစ်ခြင်းအကြံအဖန်တွေချည်းတင်းပလိတ်များအပြင်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်မှဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့်သုံးစွဲသူများကစံပြလုပ်ငန်းအသွားအလာ parameters များကိုအောင်မြင်ရန်သူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက် s အတွက်ထိန်းညှိဖို့ခွင့်ပြုထားတဲ့ရရှိနိုင်ပါသည်အသုံးပြုသူပုံစံလုပ်ရန်တင်းပလိတ်များလည်းရှိပါသည်။ တိုက်ရိုက်ပူးတွဲမီဒီယာ, ftp က်ဘ်ဆိုက်များ, ဆာဗာများ, နှင့်ဖိုင်တွဲများစောင့်ကြည့်; ကွာတွေဟာအစာကြေ! တစ်ဦးကွင်းဆင်းစားသုံးမိလိုအပ်ပါသည်လျှင်, ထို Gloobox စားသုံးမိတောင်မှသင်၏ workflow ကူညီမယ့် RDX drive ကိုရှေးခယျြစရာရှိပါတယ်။ ငါမီဒီယာ back-up ဖော်ပြထားခြင်းခဲ့သလား (ကျနော်မကိစ္စတွင် ... ဒါကြောင့်လည်းမီဒီယာ back-up ရှိပါတယ်!) ဒါဟာ Clip အမည်ပေးခြင်းစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေအဘို့သဘာဝမထိုက်မတန်မယ့်တစ်ဦး Subclipping function ကိုရှိပါတယ်။ SOAP & VDCP protocol ကိုထောက်ခံမှုကဒီဖိုင်ကို-based MXF စားသုံးမိပါဖြေရှင်းချက်၏ Awesome ထွက်လှည့်လည်ကူညီပေးသည်။ Gloobox စားသုံးမိပါကသင်၏လုပ်ငန်းအသွားအလာ၏ထိရောက်မှုကိုများပြားစေမည်ဟုမိန့်တဲ့ Multi-codec, Multi-ဦးတည်ရာကို, Multi-resolution ကို, Multi-စီး, မျက်နှာစာကိရိယာတခုဖြစ်တယ်။ တိုတိုအတွက် Gloobox စားသုံးမိ Multi-tastic ပါ!
Gloobox Contributor အဆိုပါ Gloobox Capture, ပေါင်း SStP ကဲ့သို့တူညီသောပုံစံများကိုဝင်ရောက်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာတည်းဖြတ်ရေးနှင့် ingesting စဉ်တည်းဖြတ်ရန်စွမ်းရည် automated ဘဲလျက်နှင့်အတူတစ် metadata ကိုတည်းဖြတ် option ကိုထောက်ခံပါတယ်။ အဆိုပါ Gloobox ပံ့ပိုးသောဤမိုဘိုင်းထုတ်ကုန်ထောက်ပံ့၏အပြည့်အဝနိုင်စွမ်းရှိ၏ Android ထုတ်ကုန် (ယေဘုယျအားဖြင့်ကူညီပံ့ပိုး), ဘလက်ခ်ဘယ်ရီစမတ်ဖုန်း, ကို Canon 5D, Pro ကို သွား. , ကို 'ကိုယ်' 'Trinity; iPad, iPhone, & iPod ကို။ ဘယ် Contributor template ကိုအသုံးပြုနေပါသည်အဆိုပါစားသုံးမိလည်ပတ်ပုံကိုဆုံးဖြတ်သည်; ကဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် ထိုကဲ့သို့သောမီဒီယာပူးတွဲတိုက်ရိုက်, Server များနှင့်စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ Folders အဖြစ်မျိုးစုံသတင်းရင်းမြစ်။ ထည့်သွင်းသည့်ဒေတာထို့နောက်မျိုးစုံခရီးစဉ်များအတွက်ထွက်ဦးနိုင်ပါတယ်ယေဘုယျသိမ်းဆည်းခြင်း, Nan, ဒါမှမဟုတ် SAN များအတွက်ကြံ့ကြံ့ခံ။ သူက Contributor တိုက်ရိုက်စားသုံးမိနိုင်စွမ်းနှင့်အတူ useable တစ်ဦး Metadata စစ်ဆေးမှုများရှိပါတယ် လွန်စွာလိုလားသော ISIS အဖွဲ့ / ဆက်စပ်မှုတွေ။ အဆိုပါ Gloobox Contributor တစ်ဦးက Web-အခြေပြု Multi-stream ကိုအကျိုးရှိစွာအသုံးချနှင့်ဖိုင်တစ်ဖိုင်-based မိုဘိုင်းမီဒီယာစားသုံးမိဖြေရှင်းနည်းရှိပါတယ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီထုတ်ကုန်မိုဘိုင်း device application များအနေဖြင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာ၏ဖမ်းယူခြင်းသို့ယင်း၏လက်လှမ်းမမီတိုးချဲ့အားဖြင့် Gloobox စားသုံးမိနှင့်အတူတွဲဖက်အတွင်းအထူးသဖြင့်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်တယ်။
အဆိုပါ Glookast မီဒီယာ retrieval ဆော့ဖျဝဲ၏ဤအထင်ကြီးအပိုင်းအစတစ်ခုကစီမံခန့်ခွဲမယ့်အကြောင်းအရာကိုအပေါ်စစ်ဆင်ရေး၏ "တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း restore" လုပ်ဆောင်ဖို့အံ့သြဖွယ်စွမ်းရည်ကိုထောက်ပံ့ပေး လွန်စွာလိုလားသော ဆက်စပ်မှုတွေ. အဆိုပါတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းနှင့်အတူအရှင်သိသိသာသာဒေတာသိုလှောင်မှုကုန်ကျစရိတ်လျှော့ချခွင့်ပြု, တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသောဘ်ဆိုဒ်ပေါ်တွင်အဆင်သင့်မှာပိုပြီးအသုံးအများဆုံး data တွေကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းအနေဖြင့်တစ်ဦးစတူဒီယိုစျေးနှုန်းချိုသာရေရှည်စျေးနှုန်းချိုသာ nearline သိုလှောင်မှုက်ဘ်ဆိုက်များအတွက်လိုအပ်သောပေမယ့်ဒီထက်အသုံး data တွေကိုသိမ်းထားနိုင်ပါတယ်နိုင်စွမ်း restore ။ မီဒီယာ retrieval ဝန်ဆောင်မှု-oriented, မလိုအပ်တဲ့အဖြစ်မျှမျှတတမီဒီယာပြန်လည်ရယူခြင်းအင်ဂျင်ဖြစ်ခြင်းအားဖြင့် workflow နှင့်လည်းဒေတာဘေးကင်းလုံခြုံမှုနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်။
အဆိုပါ Gloobox Moover Glookast ရဲ့ထုတ်ကုန် suite ကိုထွက်စာရငျး။ ဒါဟာ workgroups, SAN, NAS, မော်ကွန်းတိုက်ထံမှ / မှ Multi-စီး MXF ဖိုင်လွှဲပြောင်းများအတွက်အာရုံစိုက်အသုံးဝင်သော software ကိုသာဖြေရှင်းချက်ပါပဲ။ ဤသည်လုပ်ငန်းအသွားအလာ outgest ဖို့ကတစ်ဦးစံပြထုတ်ကုန်စေသည် s ကို။ ဒါဟာ Inter-ပလက်ဖောင်းလက်ပတ်နာရီ folder ကို Workflows ရှိပြီးဖြစ်ပါသည် လွန်စွာလိုလားသော သဟဇာတ ISIS အဖွဲ့ / ဆက်စပ်မှုတွေ။
အလွန်ကွင်းမှနေရာကနေလိုအပ်ချက်များ၏ Workflows စီတဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲရမည်ဖြစ်ပြီးသို့မဟုတ်ကြောင့်စီမံကိန်းကိုသို့မဟုတ်စတူဒီယို၏အထူးသဖြင့်လိုအပ်ချက်များပေါ်တွင်အခြေခံထွင်းထုရလိမ့်မည်။ Glookast ထိပ်တန်းအရည်အသွေးသည်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်းနှင့်စားပွဲမှအသုံးဝင်သော features နဲ့ options အမျိုးမျိုးကိုပေးခြင်းဖြင့်လုပ်ငန်းအသွားအလာလွယ်ကူချောမွေ့ကူညီပေးသည်။ လာမည့်ဧပြီလမှာသူတို့ရဲ့ပြပွဲထုတ်စစ်ဆေး NAB ပြပွဲ။ သူတို့ကအထက်တောင်ပိုင်းခန်းမတဲမှာဖွစျလိမျ့မညျ #SU6104 ။ Gloo နှင့်သင်၏ Workflows အတူတကွကျင်းပရန်!
GLOOKAST စစ်မှန်တဲ့ Multi-format နဲ့, Multi-resolution ကို MXF Workflows ၏ဒီဇိုင်းနှင့်အကောင်အထည်ဖော်မှုအဘို့အဆန်းသစ်, modular tools များဖြစ်ပေါ်ပါသည်။ GLOOKAST converting နှင့်မျိုးစုံပလက်ဖောင်းကိုဖြတ်ပြီးချောမွေ့စွာပေါင်းစည်းမှုမှတဆင့်အကြောင်းအရာဖြန့်ဝေ, မျှဝေ, စီမံခန့်ခွဲဖမ်းယူ၏ရှုပ်ထွေးဖယ်ရှားပေးပါသည်။ GLOOKAST အကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါက, သွားရောက်လည်ပတ်: www ။ glookast.com
2014 NAB ပြရန် 2014 NAB ပြရန် 2014 NAB ပြရန်, NAB ပြရန် 2014 2015 NAB ပြရန် 4K audio အကြောင်းအရာ Gloobox capture Gloobox Contributor Gloobox စားသုံးမိပါ Gloobox Moover GLOOKAST Glookast မီဒီယာ retrieval Multi-format နဲ့ Multi-resolution ကို multiplatform သိုလှောင်ခြင်း 2015-02-27
ယခင်: iPi ဖျ 16 ကို USB ကင်မရာများကို, လေး Kinect က2အာရုံခံခြင်းနှင့်သုံးမင်းသားခြေရာကောက်အဘို့ကို Motion Capture အထောက်ပံ့ကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်
နောက်တစ်ခု: ဆက်သွယ်ရေးမြင်ယောင်ကြည့်ပါ - အ 2015 NAB ပြရန်အဘို့ကြီးသော